Neymar oo aaminsan in Barcelona ay ku guulaysan karto Horyaalka – Gool FM
(Barcelona) 06 Feb 2017 Laacibka kooxda Barcelona ee Neymar ayaa rumaysan in Barcelona ay fursad fiican u haysato ku guulaysiga horyaalka ee xiliciyaareed kan.
Barcelona ayaa sabtigii 3-0 ku garaacday kooxda Bilbao oo marti u ahayd, taas ayaana ka caawisay inay hal dhibic u soo jirsadaan hogaanka horyaalka, inkasta oo Real Madrid ay baaqi u tahay laba kulan.
Neymar ayaa sheegay in xiliciyaareedkii hore ay hogaanka ku qabteen ilaa iyo 12-dhibic, balse dhamaadkii ay horyaalka ku qaadeen kaliya 2-dhibic.
“Waan ogahay in arinku uu xoogaa yar adagyahay, laakiin ma jiro wax aan dhici karin, tusaale ahaan xiliciyaareedkii 12-dhibic ayaan ku qabanay hogaanka laakiin horyaalku wuxuu dhamaaday anaga oo ku hayna kaliya 2-dhibic hadii aanan qaldanayn” ayuu yiri Neymar.
“Wali waxaa haray kulamo badan, wax walbana waa suurogal inay dhacaan, 7-koob ayaan kula guulaystay Barcelona, walina waxaan doonayay kuwo kale”.
“Waxaan xooga saaraynaa kulamada soo socda, aad ayaan u rabnaa inaan ku guulaysano horyaalka, waana u dagaalamaynaa dartiis”.
"Kuma faraxsani Bayern Munich" - Douglas Costa oo doonaya inuu katago kooxdiisa